पहिले आफू परिवर्तन हुन सिकौं : दुर्गा खनाल - Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column पहिले आफू परिवर्तन हुन सिकौं : दुर्गा खनाल
पहिले आफू परिवर्तन हुन सिकौं : दुर्गा खनाल
आफैमा विश्वास गर्न सकिएन भने
बाटोभरी काँडाले घोच्नेछन्,
बाँच्न जनिएन भने,
हरिया रुख जलाएर ।
स्वाभिमानी भइएन भने
घुंडा टेकाउने छन्.
अनेकौं आश देखाएर ।
हिंड्न जानिएन भने
पाइलै पिच्छे छिर्के लागाउनेछन् ।
कसैले आफ्नै बाटो रोज्छ
आफ्नै पाराले जिउँछ,
न त अरुको मतलब गर्छ
र पनि चासो राख्छन्
आफ्नो शरीर हेर्दैनन्
अरुलाई मोटो अनि पातलो
अपरीपक्क योग्यताको सान
रट्ने अनि रटाउनेहरु।
घर सफा गर्दैनन
बस्तीमा फोहोर देख्छन्
फोहोर आफ्नै दिमागमा
आफू परिवर्तन हुन
अरुलाई सर्लक्क पल्टाउन
पहिले आफै परिवर्तन हुन सिकौं अनि मात्र अरुलाई सिकाऔं !
Previousसपनाको उडान : सपना देखेदेखि उडान भर्दा सम्मको त्यो समय
Nextजोयस मायरका जीवनोपयोगी भनाइहरु